Semalt: Vidéo Marketing toy ny Strategie Vitaly ho an'ny SEO Rankings
Amin'ny fampakarana ara-dizitaly dia manome fahafaham-po ny fahafahana an-tserasera ny fametrahana fiarovana, indrindra amin'ny SERPs. Ny Search Engine Optimization (SEO) dia manampy ireo orinasam-pitadiavam-baovao mahazatra, indrindra fa raha te hitsikera ny mpividy vaovao an-tserasera. SEO dia mandeha amin'ny tranonkala iray manolotra azy ho toy ny iray amin'ny tena soso-kevitra ho an'ny fikarohana momba ny fikarohana finday. Ny SEO dia mampiasa ny tolotra, ny fiverimberenana ary ny famoronana ny votoatin-tsoratra marina dia ny fanamafisana ny fahaizan'ny mpampiasa.
Ny dokam-barotra amin'ny Video dia fitaovana hafa momba ny fampiroboroboana ny fampitam-baovao amin'ny aterineto izay mety ahitanao ny tranokalan'ny tranonkala ihany koa - boat blue book nada boat values. Ny orinasa lehibe indrindra nahazo ny orinasa dia nahitana vokatra tsara tamin'ny fampidiran-drivotra ny sehatra sy ny fiarovana ny tambazotra an-tserasera sy ny mpanjifa. Raha toa ka misy safidy iray voafaritra tsara, ireo tranonkala ahafahan'ny lahatsary manome 50% isa kokoa noho izy ireo manana ny lanjany tsy misy lahatsary.
Alexander Peresunko, Mpanantanteraka Success Manager van Semalt , Misaotra ireo zava-dehibe nataonao mba handraisanao ny lahatsoratry ny mpihaino amin'ny lahatsary.
Ho toy ny fanatsarana ny lahatsoratry ny pejy
Ny horonan-tsarimihetsika dia nampidirina amin'ny alàlan'ny Google-algoritme amin'ny fomba maro samihafa. Ireo mpampiasa dia afaka milaza fa mety ho afaka hamoaka ny lahatsariny amin'ny sehatry ny fikarohana finday. Bijvoorbeeld:
Lahatsary fanodikodinam-peo eo amin'ny tranonkalanao
Ny sarimihetsika horonan-tsary dia azo antoka, toy ny fampiasana ny mpampiasa ihany koa ny kliknop-action-knoppen amin'ny tranonkala fampidirana. Backlinks dia mamorona ny algorithm Google ahafahana manitsy ny fanamarinanao..Raha ny fahitako azy dia mahazo ny laharam-pahamehana izay manolotra anao amin'ny tranonkala. One of the most effective tricks is to create a video clip with links to the top rated. Anisan'izany ny videocode amin'ny alàlan'ny tranonkalan'ny tranonkala automatique ho azy.
Ny fanangonana ny mailaka amin'ny lahatsary dia fitaovana tsara indrindra
Ireo mpampiasa izay mandefa mailaka an-tsarimihetsika iray hafa, dia afaka mitarika azy ireo ny hery. Ny horonan-tsarin'ny horonantsary (CTR) avy amin'ny URL voavatsy ho 300%. Ny olona misimisy kokoa ny video marketing. Ny fiarovana tsara indrindra dia ny famokarana horonan-tsary ho an'ny Google. Ankoatra izany, ity tetikady ity dia maimaim-poana. Ireo tranonkala malaza toy ny YouTube sy Vimeo dia tsy misy mpitsikilo afa-tsy ireo mpampiasa izay afaka mampiseho ny horonan-tsary ho an'ny tanjona.
Ny kunnen rangschikken
Ny horonan-tsary misy azy ireo dia mety ho hita ao amin'ny SERPs. Ity no tena zava-dehibe amin'ny teny anglisy ao amin'ny video misy anao, ary ny safidy an-tsoratra ihany koa. Ireo mpampiasa misimisy no maneho ny fihetseham-po amin'ny horonantsary, lafiny iray izay tsy voatery ho voatanisa manaraka fa maro kokoa ny tranonkala manangona. Ny Social Media Marketing (SMM) ara-teknika dia miasa tsara amin'ny tranonkala.
Ho an'ity vohikala rehetra ity mba hividy amin'ny aterineto, dia an-tserasera amin'ny internet, indrindra ho an'ny zo môtôchines. Ny Video SEO dia natao ho an'ny tanjona lehibe indrindra ho an'ny tranonkala. Ny toerana rehetra dia misy lahatsary ho an'ny sary amin'ny ankamaroan'ny SLP. Ireo mpikirakira an-tserasera dia afaka manangona ireo tranonkala tsara indrindra, nefa koa ny lahatsary ho toy ny iray amin'ireo fomba amam-panaovana azy. Amin'ny fampiasana ireo toro-hevitra ireo, ianao dia mahita ny filaminana SEO amin'ny lahatsary ho toy ny teknolojia ara-barotra an-tserasera. Ny fidirana ao amin'ny tranonkalanao dia tena zava-dehibe, indrindra raha tadiavina ny tolotra an-tserasera.